ရှေ့နေ Philippe Schol နှင့် Schiphol - မှားယွင်းသောပြန်ပေးဆွဲမှု - Martin Vrijland ကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ62019 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
Philippe Schol ဆိုတဲ့နာမည်က Schiphol နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာလူအများစုအတွက်သိပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာပါ။ Philippe Schol အမည်ကိုကြည့်ပါ။ Subliminal ဟူသောစကားလုံး Schiphol ရှိ၏။ Neuro Linguistic Programming (သို့) သူတော်ကောင်းတရားဆိုင်ရာပရိုဂရမ်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်သတိမရှိသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားနှစ်ပေါင်းများစွာမီဒီယာများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြ "hypnosis နည်းစနစ်" ၏ပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ရှေ့နေတစ် ဦး ကိုပစ်သတ်လိုက်တာကအရမ်းကိုဆိုးရွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် Derk Wiersum ကိုလူသတ်မှုဟာ PsyOp (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှု) နဲ့တော်တော်ဆင်တူတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်းဒါကနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ Philippe Schol သည်ဆေးရုံတွင်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုကြေငြာချက်သည် PsyOp ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ထုတ်မထားပါ။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် PsyOp ရှိအန ised တရာယ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောရေခဲမုန့်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Schiphol ပြန်ပေးဆွဲမှုအကြောင်းကြားစာယခုပေါ်လာသည် မှားယွင်းသောနှိုးဆော်သံဖြစ်.
နက်ရှိုင်းသောရေခဲမုန့်များနှင့် / သို့မဟုတ်အားနည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ဆင့် PsyOps ကိုမည်သို့စုစည်းနိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်အသစ်သောအစီအမံများ၊ ရည်ရွယ်ချက်၏အဓိကလူမှုရေးသက်ရောက်မှုပြproblemနာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်း ပိုရဲပြည်နယ် (ရဲ၊ တရားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်စစ်တပ်အတွက်ငွေများများနှင့်ရဲပြည်နယ်ဥပဒေပြဌာန်းရန်ပိုမိုငွေများ) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး၏ကစားနည်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော PsyOp ကိုနည်းပညာအရမည်ကဲ့သို့ပုံဖော်နိုင်မည်နည်း 1997 မှ Wag the Dog ရုပ်ရှင်သည်နူးညံ့သောဗားရှင်းတွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မီဒီယာများ၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့နည်းလမ်းများသည်ထိုစဉ်ကထက် ပို၍ အဆင့်မြင့်သည်ဟုငါတို့မဆိုနိုင်ပါ။ ။ ငါတော်တော်များများကဒီအကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်:
ထိုဆောင်းပါးများကိုအသေအချာဖတ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ဒါ့အပြင်ငါ့၌တည်၏ အသစ်သောစာအုပ် ငါနောက်တဖန်ဤခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကစားပုံကို၏စုစုပေါင်းရုပ်ပုံလွှာဆွေးနွေးပါ။ (ဖြစ်နိုင်သည့် PsyOp) Derk Wiersum ကိုလူသတ်မှုတွင် ၀ န်ကြီးဖာဒီနန်ဂရက်ပါပသည်ရဲစခန်းအတွက်အခွန်ထပ်မံကောက်ယူရန်အခိုင်အမာကိုင်ထားခဲ့သည်။ အသေးအဖွဲပမာဏ 110 သန်း ထိုထက်မက။ ဟုတ်တယ်၊ အဲ့တာမှန်တယ်လို့မင်းထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇ ၀ တ်မှုအားလုံးအတွက်အရမ်းလိုအပ်နေတယ်လေ။
ပြီးနောက်, ငါတို့ (PsyOp?) Attack ရှိခဲ့ပါတယ် မြင်ကွင်းကျယ်အဆောက်အအုံ, အ (PsyOp?) တိုက်ခိုက်မှု Telegraaf အဆောက်အ ဦး ငါတို့အဲဒီမှာဖျက်သိမ်းခဲ့တယ် (PsyOp?) Marengo ဖြစ်စဉ် ယူဆရရာဇဝတ်မှု (Self- ဖန်တီး?) Mocro Mafia headpiece (deepfake?) Ridouan Taghi ။ ငါတို့မသိဘူး သူတို့အားလုံးဟာမီဒီယာပုံပြင်တွေပဲ။ ၎င်းကိုမီဒီယာများကကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည်။ အကယ်၍ အခြားမီဒီယာသည်တိတ်ဆိတ်နေလျှင်၎င်းသည်မှန်ကန်ရမည်။ "ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းမှာမီဒီယာမှာတွေ့ရတာကိုလုံးဝမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဟေးဒီဟာကမကိုက်ညီတဲ့မာတင်ဗရိုင်လန်ရှိတယ်။"ဒါမှမဟုတ်ဒါကဒီအချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးငါတို့ John De Mol စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မှာတကယ်ပါဝင်နေတာလား။ " ဟုတ်ပါတယ်၊ John de Mol သည် Algemeen Nederlands Persbureau အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
မီဒီယာ၏ subliminal နည်းလမ်းများအခြေအနေတွင်အထက်ပါ NLP နည်းလမ်းများကိုထောက်ပြရန်မှာအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်သိမ်မွေ့သော၊ အသုံးမ ၀ င်သောပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းသည်တိကျသောအမြင်များစီမံခြင်းမှတစ်ဆင့်အသံထွက်ပရိုဂရမ်များထက်ပိုမိုအားကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနေ့စဉ်လူအများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသိမ်မွေ့သောပရိုဂရမ်သည်စိတ်ပညာ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှုသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလေ့လာခဲ့သည့်ရွေးချယ်ထားသောအုပ်စုများမှသာသိသောနည်းစနစ်များမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်၊ ဓာတ်ပုံများ (သို့) ရွေ့လျားနေသောရုပ်ပုံများ (သို့) ဤသူတော်စင်ပရိုဂရမ်များပြုလုပ်သောဇာတ်လမ်း၏တည်ဆောက်ပုံအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ NOS သတင်းမှလှည့်ပတ်နေသောစက်ဝိုင်းများနှင့်သတင်းနှင့်ပတ်သတ်သောသတင်းဖတ်သူများသည်သိမ်မွေ့သော hypnosis နည်းလမ်းများဥပမာများဖြစ်သည်။ ဗစ်တာ Mids ကဲ့သို့သောထင်ယောင်ထင်မှားပြုသူများသာဤကဲ့သို့သောအရာများကိုအသုံးချသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကောင်းထင်မည်ဖြစ်သော်လည်းနေ့စဉ်သတင်းများတွင်ထိုကဲ့သို့သောနည်းစနစ်များ၏လေ့ကျင့်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုမစိုက်ပါ။ ထိုသို့သောနည်းစနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေပြီဆိုလျှင်ပင်သတင်းစာကိုဆက်ဖတ်နေခြင်းသို့မဟုတ်သတင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်သို့မဟုတ် 'ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအားအမြဲတမ်းနားမလည်' ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်သင်သိနိုင်စွမ်းထက်သင်၏သူတစ်ပါးအပေါ်မသိစိတ်အပေါ်ပိုမိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားသည်။ Schiphol မှပြန်ပေးဆွဲခံရသည့်သတင်းသည်အမှားအယွင်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းသင့် ဦး နှောက်မှယနေ့အခြားသတင်းများဖြစ်သည့် Philippe Schol ၏ကျောက်ဆစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သူတော်ကောင်းတရားဆိုင်ရာပရိုဂရမ်ပုံစံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေသည်။ ရဲစခန်းသို့ငွေများများနှင့်ရဲပြည်နယ်ဥပဒေပြဌာန်းဥပဒေအသစ်များအားသင်လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက်အမြဲတမ်းသင့်ကိုလက်ခံမှုပုံစံဖြင့်ထားရှိရမည်။
ဗွီဒီယိုတွင် 'စာတန်းထိုး' ကိုရွေးပါ၊ ထို့နောက် 'automatic translate' ကိုရွေးချယ်ပြီးဒတ်ခ်ျစာတန်းထိုးအတွက် 'Dutch' ကိုရွေးချယ်ပါ
source link ကို entries တွေကို: wikipedia.org, destentor.nl, rtlnieuws.nl
Adobe, Twitter နှင့် mainstream media များသည်နက်ရှိုင်းသောအမှားများကိုတိုက်ဖျက်မည်လား။
Tags:: ရှေ့နေ, deepfake, deepfakes, Derk, Derk Wiersum, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ရိုက်ချက်, ပြန်ပေးဆွဲခြင်း, ပြန်ပေးဆွဲအစီရင်ခံစာ, မီဒီယာ, အသိပေးချက်, ချ, စစ်ဆင်ရေး, Philippe Schol, စိတ်ဓါတ်, psyop, Schiphol, Wiersum
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 25
ထပ်မံ၍ idd အားခေါ်ခြင်းသည် ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည်၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုနှိုးစက်နှင့် parool သတင်းထောက်သည်ထွက်ခွာသွားသောခန်းမသို့ကြွေးကြော်သည်။
"မင်းဘာမှားတာလဲငါ့ကိုမေးနိုင်လားခင်ဗျာ?" ။ link ဖြတ်ထားသောစာသားကိုကြည့်ပါ၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါသည်၊ Parool, Telegraaf, NRC သည်အရေးမကြီးတော့ပါ
CUT & Paste နှင့်နောက်နေ့ Pauwtje တွင်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု (ရှည်လျားသောကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတွင်) ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းများပါ ၀ င်သည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုချေးငှားသူများအားစိတ်ဓာတ်စစ်တပ်တစ်ခုလိုအပ်နေရန်ကောင်းသောညတစ်ညအိပ်စက်ခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပြုလုပ်ရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း၊
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 36
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 01: 20
MSM တွင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်အရာသည်အထက်တန်းလွှာအစောင့်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အားလုံးစနစ်များအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ပါ။ ယုံလွယ်သောသိုးသည်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ တိုင်းတာသည်မှာသိသည်
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 10: 33
မှန်ပါသည်၊ သူတို့၌အာဏာနှင့်ငွေကြေးရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သာမန်လူများအတွက်အမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေပြီးလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေသည်။ မင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး သူတို့ဟာတကယ့်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်သမာဓိရှိခြင်းမရှိဘဲအာဏာနှင့်ငွေများများပြားလာသည်။ ဒါကရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 10: 38
ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်မသေချာမရေရာမှုများရှိသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ သူတို့သည်သာမန်လူများနှင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ မရလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများဖြစ်သောကြောင့်အဓိကကျသောနေရာတွင်ရှိနေသောလူတန်းစားလူတန်းစား။ ဆက်စပ်သောအခွင့်ထူးများ၊ ငွေများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲသော့ချက်စာတန်းများပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 19: 25
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမှန်မှာ၊ ဇာတ်ညွှန်း၏အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများသည်သူတို့ကြံစည်ထားသောအတိုင်းအတာနှင့်အနည်းဆုံးသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအားတွယ်ကပ်ထားရန်ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။ သွေဖည်သောအသံတိုင်းကိုပုံမှန်သံသယရှိသူများကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သည်။ ဥယျာဉ်များနှင့်ခြံစည်းရိုးများကိုသိမ်းဆည်းထားသောဒိုင်ဗင်များသည်လေးလံသောအလေးချိန်ရှိသည့် Madurodam တွင်မည်သည့်အခါကမှကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အားလုံးသည်စစ်မှန်သည်၊ ငြိမ်နေပြီးမြုံနေသည်။ သင်ထိုတွင်နေထိုင်လိုသည်။
« Adobe, Twitter နှင့် mainstream media များသည်နက်ရှိုင်းသောအမှားများကိုတိုက်ဖျက်မည်လား။
နိုက်ထရိုဂျင်ပြproblemနာကဘာလဲ၊ လယ်သမားတွေဘာကြောင့်ညည်းညူတာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်မြန်နှုန်းလျှော့ချတာလဲ။ »